Faa’iidada soo galootiga u leeyihiin Sweden oo lagu soo bandhigay cilmi baaris | Somaliska
Cilmi baaris uu sameeyay khabiir ka tirsan jaamacada Mittuniversitet oo lagu magacaabo Jesper Strömbäck ayaa lagu soo bandhigay in soo galootigu ay faa’iido dhaqaale oo muhiim ah u leeyihiin Sweden. Cilmi baarista ayaa lagu muujiyay in dadka ka yimaada wadamada kale ay kor u qaadaan dhaqaalaha wadanka Sweden qaasatan dhinaca dhoofinta.
Sweden ayaa ah wadan ku xiran wax dhoofinta, iyadoo ku dhawaad 46% dhaqaalaha wadanka uu ka yimaado waxyaabaha ay dhoofiyaan shirkadaha Swedishka ah. Soo galootiga ayaa warbixinta lagu sheegay in ay fure u yihiin sidii ay shirkadaha Swedishka ku gaari lahaayeen macaamiisha dibada isla markaana ay u samayn lahaayeen xiriiryo cusub.
Warbxinta ayaa sidoo kale muujiysay in 15% dhamaan shirkadaha ka dhisan Sweden ay leeyihiin dad soo galooti ah, kuwaasoo la sheegay in ay yihiin shirkado kobac wanaagsan marka loo barbar dhigo kuwa ay leeyihiin Swedishka. Soo galootiga ayaa sidaas ku abuura shaqooyin badan. Faa’iidada guud ee soo galootiga ayaa cilmi baaristu sheegtay in ay aad uga badan tahay dhaqaalaha Sweden uga baxa soo dhaweyntooda.
Marka laga tago dhinaca dhaqaalaha, ayaa faa’iidada ugu muhiimsan ee soo galootiga ay u leeyihiin Sweden ay tahay daryeelka dadka waaweyn, iyo qabashada shaqooyinka hoose ee aysan doonayn Swedishka. Sweden iyo inta badan wadamada Yurub ayaa la filayaa in ay la soo daristo caruur yari sanadaha nagu soo aadan maadaama aysan waalidiintu dhalin caruur ku filan, taasi oo keeni doonta dhibaato weyn oo ku saabsan daryeelka dadka waaweyn. Soo galootiga ayaa la filayaa in ay buuxiyaan booskaas.
Runti anaga hadanu nahay somali buufis leen jecel nahy labada sano ka waran iyo basboorka imisa lugu qadana iyo waxyaalo la mid ah. hhhhhhhhhhhhhhh
Sweden sharci ma dhiibtaa hadda ayada iyo finland yaa roon ila talia qof hadda ka hor sweden safaaradeeda faro ka qaaday hadduu hadda iska dhiibo sweden farihi ma so baxaayaan? Taladiina wa muhiim
walaal waxaan kugula talin lahaa hadii aay swidhanka safarodadooda mar hore faro kaa qaday farahaas waa la arkaya sidaas daraadeed filand aad ama norwy
asxaabey marka koobaad asc ramadaan kareem waxaan idin weydiinayaa qofkii wax ka og dadki hada ka hor lagu xirey laba sano islama aadnan nooleyn maxaaaa iska bedeley qof inta dadkiisii dhiigii laga qaaday eee diidmo la siiyey qofkii ooo aaan dhiig laga qaaadin sababtuna aheyd e sano mawada nooleyn
Aniga waxaan ka mid ahay dadkii labada sano lagu xujeeyay ilaa iyo hadane wax la iisoo tuuray ma jiraan xataa dhacaanka DNA bil walbane magareeshinka waa wacaa waxeey iigu dhahaan sug sug sug hada maba iiga qabtaan tel markii iigu danbeeysay oo tel leyga qabto waxeey eheed labo bil kahor waxeeyna iigu dhaheen arintaada samarka markii laga soo noqdo ayeey jirtaa marka wixii qeerka ku jiro alaha na waafajiyo
Abdi Bidaar says:
Warkan maalin hore ayaad qortay Sxb hadaanan qaldanayn oo ay tahay cilmi baadhis kale.
Abdi bidaar mawdiicii hore waxuu ku saabsanaa dhalmada caruurta halaha danbe ayee isaga egyihiin balse waa laba mawduuc kala duwan.
Dadkaan labada sano ku waasheen maxaa ka qaldan waan la yaabayee hal qof miyaa 5 magac sameesta kkk 1 maalin sida dad isbalan saday ayee soo qoraan 2 sano waraada caadi iska dhiga ee migration ka la xiriira qeybta information ka.
ASC WALAALAYAAL DADKII 2SANO DAD BADAN OO SANADKAN A OGOLAADAY BAA JIRA OO MUDO DIIDMOOYIN BADAN HAYSTAY MARKA INAGUNA WAAN KU KIGNAA ANIGA HADA WAAN SUGAYA WAAN WACA SUG BAY DHAHEEN SUMMERKA KA DIB KIISKAAGA LA FIIRINAYAA MARKA AAN ISKA SAMIRNO WAKHTIGA ISKA DAAHIYAAN MOOYEE WAXAN RAJAYNAYAA IN DHAMAAN CULAYSKA LA INAGA WADA QAADO WAAYO XANUUNKA AY LEE DAHAY ANIGA UUN BAA DAREEMAYA MARKA NINKAAGII AMA NAAGTAADI IYO ILMO KA MAQAN YIHIIN MIDA KALE DADKA WARAYSTA MARWALBA WIXII CUSUBNA HA LA SOO QORO ANIGU MAALMAHAN MA ARAG WADA 2SANO DIIDMO HELAY MAHADSANIDIIN
War labadi sano maxa laga yiri walalyal hhhhhhhhh
asc aniga waxan arkay yar hada loo ogolaaday xaska macnaha markii hore ilmaha ayey ogolaasho siiyeen xaaskana wey u diideen dacwo ayow ku celiyey hada xaaskii waaa loo ogolaaday markii horen 2 sano ayey sababtu marka waa sidaa asxaabey
Walalayaal su’aashayda waxey tahay
Wxn ahey wiil da’yar isku dhiibey oo Switzerland jooga wxn rabaa sweden
Inaan imaado seen Uga heli Kara qaabilaad Sweden ama an kaga badbaadi karaa in ay isoo celiso dawlada Sweden